Indlela ende eya ekhaya, ibali lobomi obuphawulwe ngokubandezeleka | Uncwadi lwangoku
En Indlela ende egodukayo (1998), intombazana ifumana ubundlobongela kunye nokuphathwa gadalala kwindawo eyayimiselwe ukuba imnike indawo yokuhlala kunye nokhuseleko, kubonakala ngathi uphulukana nayo yonke into… kodwa into iya kutshintsha. Esi sisandulelo sale noveli ngumbhali waseMelika uDanielle Steel. Isicatshulwa sichaza ibali likaGabrielle, intombazana enobomi obuphawulwe ngokubandezeleka.
Ngenxa yoku kukhankanywe ngasentla, umbono wosapho kunye nekhaya ufumana intsingiselo eyahluke kakhulu kuleyo yeenkolelo zesintu. Ngaphandle kobungqina obuqinileyo bomlinganiswa ophambili, le ncwadi yoyisile iintliziyo zezigidi zabafundi. Kwaye kungenxa yokuba ukungena kweli bali kukuqulatha ubunzima kunye nokungabikho kokusesikweni, nangona kunjalo, ibali likwabonisa indlela yokoyisa imeko enjalo.
1 Isishwankathelo seNdlela eNkulu yeKhaya
2.1 Isimbo sokubalisa
2.2 Ingaphezulu kwenoveli malunga nokuxhatshazwa kwabantwana
3 Malunga nombhali, uDanielle Steel
3.1 Ubomi obunzima bombhali
3.2 Ubomi obunxulumene nokubhala
3.3 Ubuntwana obubuhlungu njengomxholo ophambili
3.4 Ezinye zeencwadi ezithengwa kakhulu nguGabrielle Steel
Isishwankathelo se Indlela ende egodukayo
Njengoko kuchaziwe kwimihlathi edlulileyo, inoveli ijikeleze usizi lwentombazana eyonzakeleyo emzimbeni nasengqondweni. Ngolunye ulwazi, intombazana eneminyaka emithathu ubudala iyaziqonda ukuba inetyala lokuhlukumeza, kuba umama wakhe onogonyamelo utsho njalo. Ujongene noku, utata-nokuba kungakhathali okanye uloyiko-akakwazi ukunqanda ukungabikho kokusesikweni kuGabriele.
Ngale ndlela, ngokuhlukunyezwa, ukubethwa kunye nokuthukwa ngokulandelelana kolo suku, kubanzima ngokwenene ukukhula komntwana. Njengoko intombazana ikhula, ukwanda ngokwasemzimbeni, ngomlomo nangokwengqondo nako kuyanda. Ukuza kuthi ga ngoku, Emva kokubetha intombazana ephantse yabulala, umama wakhe wenza isigqibo sokushiya kwikhaya loonongendi uGabrielle. Hayi ngaphandle kokuthembisa kuqala "Ndizobuya."
Kwikhaya loonongendi, le ntombazana ekugqibeleni iyalwazi uthando kunye nonyango olulungileyo, kude kube ngoku. Sele ekwishumi elivisayo, uGabrielle uthandana nomfundisi oselula kakhulu, ngenxa yoko uhlangabezana nothando lwakhe lokuqala ngendoda. Ngelishwa, umfundisi uyasweleka, ke le ntlekele ibetha entliziyweni yelishwa lentombazana.
Okwangoku, intombazana ibonisa ukuzimisela okuncomekayo ukuba ingoyiswa kukudimazeka okanye ukuthabatheka. Ngaphandle kwayo yonke ilahleko ebuhlungu, umlinganiswa ophambili uyakwazi ukuphilisa amanxeba akhe kunye nokuqhubela phambili. Okokugqibela, uGabrielle ugqiba kwelokuba ashiye ikhaya loonongendi ukuze afumane inkululeko kwilizwe langaphandle ... apho ukuphoxeka kungaswelekiyo, kodwa sele eyazi indlela yokujongana nayo.
Uncwadi lukaDanielle Steel lungahlulwa bubunzulu bengqondo yabalinganiswa bakhe (Le ncwadana ibaliswa kumntu wesithathu ayikho ngaphandle). Nangona iNew Yorker ichongwe njengombhali weenoveli, Indlela ende egodukayo ayinanto yakwenza nesihloko eso. Ngokuchasene noko, ukuluhlaza yeyona mvakalelo iphambili kuphuhliso oluninzi.
Ngenxa yoko, inkcazo ecacileyo yazo zonke iintlungu zomzimba kunye neemvakalelo ezivezwe ngumdlali ophambili iyothusa kumbukeli. Akukho sizathu sokuzithemba kwisakhiwo sebali, nokuba umncinci kangakanani umlinganiswa ophambili. Kwangokunjalo, ngelizwi lombalisi okude, umfundi uyayibona imeko-bume kaGabrielle enobutshaba kunye nokuvuma kwakhe nokusondelelana.
Ingaphezulu kwenoveli malunga nokuxhatshazwa kwabantwana
Indawo yokwamkela iyaphazamisa kakhulu: intombazana eneminyaka emithathu ixhatshazwa ngunina. Umfazi unengxaki (engazibandakanyi?) Yotata ongakwaziyo ukusebenzisa indima yakhe njengomkhuseli wosapho. Ngaphandle kokuphazanyiswa "ukwamkela", umbhali ngokuthe ngcembe uyakwazi ukuhambisa ezinye iimvakalelo.
Ngale ndlela, i-Steel isuka kwindawo exineneyo kakhulu ekuvuseleleni iimvakalelo zethemba, nokuba kuphakathi kwamashwa. (Apho kukho ikhonkco elingenakuphikwa elivelisiweyo eluntwini). Emva koko, Iindinyana zivela ngeempawu ezithile zethenda, ngelixa Ukuqina kunye nokomelela kwangaphakathi kukaGabrielle kuyabonakala. Ngesi sizathu, abafundi bahlala de iphepha lokugqibela bazi indawo abaya kuyo.
Malunga nombhali, uDanielle Steel
Nge-14 ka-Agasti ka-1947, umbhali wangoku uDanielle Steel, owaziwa ngeenoveli zakhe ezininzi, wazalelwa kwisiXeko saseNew York. Inyaniso, Uphakathi kokufundwa ngokubanzi eMelika kwaye uye wazisa uvelwano kubafundi bakhe. Kwaye oku akuqhelekanga, abaphulaphuli banxibelelana ngokulula namabali abo abalinganiswa abanyamezelayo ebusweni bamava anzima.
Ubomi obunzima bombhali
I-biography kaDanielle Steel ayisiyiyo "ibhedi yeeroses." Ngamava abo, imvelaphi yamazwi abo inokuqondwa ngendlela ethile. Ngaphandle kwengxelo, ubukrelekrele baseNew York babhale nemibongo kunye neencwadi ezimbalwa ezingezizo ezobuxoki. Ukongeza, ngo-2003 wavula igalari yokuxhasa amagcisa asakhulayo.
nayo, Isinyithi sinobomi obuthile, obaphawulwa ziintsilelo kwinqanaba lesibini kunye nosapho (ushiye imitshato emihlanu ngasemva). Nangona kunjalo, ukwazile ukoyisa yonke imiqobo, enyanisweni, uthathe ithuba lokuyila kunye nokuthengisa kwezi meko ngokubhala. Ngelo xesha, Umbhali waseMelika unodumo oluhle kakhulu lokubhala Kwinqanaba likazwelonke nakwamanye amazwe.
Ubomi obunxulumene nokubhala
UDanielle Steel waqala ukubhala esemncinci kakhulu; Sele ekwishumi elivisayo wayenemincoko emininzi yemibongo (epapashwe kumashumi eminyaka kamva). Kamva -Waneminyaka eli-18 ubudala- wayigqiba inoveli yakhe yokuqala, nangona, ngokufanayo nemibongo yakhe, wayipapasha emva kweminyaka emininzi.
Ixesha elidlulele, Isinyithi sikwazile ukupapasha ngaphezulu kweencwadi ezingamashumi asibhozo, ezinye zineerekhodi zentengiso okanye iindawo zokuqala ze ba thengisi. Njengokuba oko kwakungonelanga, uCasa del Libro wamjonga njengombhali ofundwayo kwihlabathi liphela, ngaphezulu kweekopi ezizigidi ezingama-800 ezithengisiweyo. Kunye nale, waziwa njengomdali oqaqambileyo kunye noqobo; Iintsomi (2019) lolona papasho lwakhe lutshanje.
Ubuntwana obubuhlungu njengomxholo ophambili
Njengomntu ophambili we Indlela ende egodukayo, UDanielle Steel wehlelwa zizinto ezibuhlungu ebuntwaneni bakhe. Ke ngoko, ubuntwana buye babonisa ubomi obukhulu kunye nomxholo woncwadi kuye, ngakumbi emva kokuphulukana nonyana (uNicholas). Wayekhathazwa kukuphazamiseka kwengqondo de wazibulala ngo-1997. Emva kokusweleka konyana wakhe, u-Steel wathumela Ukukhanya kwakho kwangaphakathi.
Ipapashwe ngo-Okthobha u-1998, Ukukhanya kwakhe okuqaqambileyo -ngesiNgesi- Esinye sezihloko zakhe ezineyona mpumelelo inkulu yokuhlela. Kwakuloo nyaka, kwaqaliswa ngentsimbi Indlela ende egodukayo (Meyi) kunye Ilitye (EyeKhala). Ngoku ezi zibhalo zimbini zokugqibela zifunyenwe ukusebenza kakuhle kweshishini, kodwa ayithelekiseki nodidi oluthengisa kakhulu olugcinwe zezi ncwadi zilandelayo:
Ezinye zeencwadi ezithengwa kakhulu nguGabrielle Steel
Umyalezo ka Nam (Umyalezo osuka kuNam, 1990)
Iigugu (Iiglasi, 1992)
Isipho (Isipho 1994)
Uzuko lokuthula (Cwaka, 1996)
Izibuko elikhuselekileyo (Ichweba elikhuselekileyo, 2003)
I-ecos (Amanqindi, 2004)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Indlela ende egodukayo
UDaniel Martín Serrano. Udliwanondlebe nombhali we-Insomnia